Home Somali News UN Warbixin: Fallaagada Xuuthiyiintu waxay hubka ka helaan IRAN
Warbixin ay soo saartey hay’adda Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in dalka IRAN hubka iyo rasaasta u gudbin jireen fallaagada Xuuthiyiinta tan iyo sanadkii 2009.
Warbixintan oo laga hor akhriyey Golaha Amaanka ee Qaramada Midobey, ayaa lagu sheegay in sanadkii 2013 ciidamada badda ee Yemen ay qabteen markab laga lee yahay dalka IRAN oo xanbaarsan hub & rasaas.
IRAN ayaa lagu eedeynayaa in hubeynta Xuuthiyiinta ay ka soo bilamatey sanadkii 2009, sida ay qortey AFP, markaas oo fallaagadu ay dagaalo dhuumaaleysi ah ka bilaabeen xadka u dhexeeya Sucuudiga iyo Yemen.
IRAN ayaa lagu eedeynayaa in dabka ka huraya dalka Yemen ay qayb ka tahay wáqtigana ay saraakiil sarsare ka joogaa Yemen.
Dalka IRAN ayaa iska fogeysey eedeymahan, waxaana ay dalka Sucuudiga ku eedeysey in ay ka masuul yihiin wixii ay ka geysteen Yemen kadib weerarkii ay ku qaadeen, taas oo ay sheegeen in ay xaaladda bensiin ku so daartey.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa xulada sucuudigu hoggaaminaayo ka codsadey in ay joojiyaan duqeynta si loo helo xaalad lagu wada hadli karo oo nabadda lagu raadiyo wada hadal.